David H. Kaeuper ayaa cambaareeyay xariga wariyeyaasha Telefishinka Universal TV iyo Xafiiskii Telefishinka ee magaalada Muqdisho. – STAR FM SOMALIA
David H. Kaeuper ayaa cambaareeyay xariga wariyeyaasha Telefishinka Universal TV iyo Xafiiskii Telefishinka ee magaalada Muqdisho.
Arrime fuliyaha Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya David H. Kaeuper ayaa cambaareeyay xariga wariyeyaasha Telefishinka Universal TV iyo Xafiiskii Telefishinka ee magaalada Muqdisho.
Qoraal kooban oo uu goor dhow soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Wariye Cawil Dahir Salaad iyo Agaasimihii Bariga Afrika ee Telefishinka Universal C/llaahi Xirsi Kulmiye.
Mr David H. Kaeuper ayaa ku baaqay in la ixtiraatimo xoriyadda warbaahinta, waxaana uu dalbaday in la sii daayo wariyeyaasha.
Dhinaca kale Ururka u dooda xuquuqda wariyeyaasha ee CPJ ayaa cambaareeyay xariga Wariyeyaasha Universal iyo shaqo joojinta lagu sameeyay xafiiska Telefishinka
Rhodes, ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya inay joojiyaan dhibaateynta joogtada ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta ayna ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ee lagu qeexay dastuurka dalka.
Wariyeyaashan oo la xiray gelinkii dambe ee jimcihii ee taariikhdu aheyd 2-da October ayaa la sheegay in muddo 21 maalmood ay sii xirnaanayaan, isla markaana Maxkamad la horkeeni doono.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta sheegay in maalinta berito ah uu furmi doono wadahadalii moshanadii iska soo herjeeday